Soy de Mac bụ onye na-ajụ ndị otu AB Internet na kemgbe 2008 na-eso ndị niile na-agụ ya na-ekerịta akụkọ, nkuzi, aghụghọ na ozi niile dị ugbu a gbasara teknụzụ n'ozuzu yana Mac.
Na Soy de Mac anyị doro anya na ihe kachasị mkpa bụ ịkekọrịta ọtụtụ ozi dịka o kwere mee banyere ihe nwere ezigbo obi ụtọ banyere ndị niile na-eleta anyị na ndị chọrọ ma ọ bụ na-achọ nkọwa zuru ezu banyere ngwaahịa ma ọ bụ ngwanrọ metụtara Apple na Mac. Ndị ọrụ ọrụ na-aga n'ihu na-eto kwa ụbọchị ma taa anyị nwere ike ikwu na anyị so na mgbasa ozi kachasị emetụta na Macs na Apple n'ozuzu.
El ndị nchịkọta akụkọ nke Soy de Mac Ọ bụ ndị edemede a:
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso n’otu otu egwuregwu Soy de Mac, dejupụta fọm a.
Onye nhazi na Soy de Mac kemgbe 2013 na ịnụ ụtọ ngwaahịa Apple na ike na adịghị ike ha niile. Kemgbe afọ 2012, mgbe iMac mbụ batara n’ime ndụ m, enwebeghị m kọmputa karịa oge gara aga. Mgbe m dị obere, ejiri m Amstrads na Comodore Amiga kpọọ ma tinker, yabụ ahụmịhe na kọmputa na elektrọnik bụ ihe dị n'ọbara m. Ahụmahụ m nwetara na kọmpụta ndị a kemgbe ọtụtụ afọ pụtara na taa enwere m ike isoro ndị ọrụ ndị ọzọ kerịta amamihe m, ọ na-emekwa ka m na-amụ ihe oge niile. Ga-ahụ m na Twitter ka @jordi_sdmac
Ọ bụ rue etiti afọ 2000 ka m bidoro ịbanye na Mac ecosystem na ọcha MacBook m ka nwere. Ana m eji Mac Mini eme ihe ugbu a site na 2018. Enwere m ihe karịrị afọ iri na ahụmịhe sistemụ arụmọrụ a, ọ masịrị m ịkekọrịta ihe ọmụma m nwetara site na ọmụmụ m na ụzọ nkuzi nke onwe m.
Technology ofufe ke ofụri ofụri na Apple eluigwe na ala akpan akpan. Echere m na MacBook Pros bụ ngwaọrụ kachasị mma na apụl. Udo nke iji macOS na enye gi ikike inwa ihe ohuru n’enweghi ara. Ogwe Mmetụta ahụ kwesịrị ịbụ iwu na kọmputa niile.
Hooked na eluigwe na ala kere site Ọrụ na Woz, kemgbe m Apple Watch zọpụtara ndụ m. Ọ na-atọ m ụtọ iji iMac m kwa ụbọchị, ma maka ọrụ ma ọ bụ nke obi ụtọ. macOS na-eme ka ọ dịrị gị nfe.
Bachelor of Medicine and Pediatrician site na ọrụ. Omiiko banyere teknụzụ, ọkachasị ngwaahịa Apple, enwere m obi ụtọ ịbụ onye nchịkọta akụkọ nke "iPhone News" na "M si Mac". Hooked na usoro na nke mbụ. Podcaster na Actualidad iPhone na miPodcast.
Pedro Rodas kwuru
Technology n'anya, karịsịa Apple ngwaahịa. M na-amụ na macbook, ma ugbu a Mac bụ sistemụ arụmọrụ nke na-eso m kwa ụbọchị, ma n'oge ọzụzụ m na oge ezumike.
Ọnye na -bụ Javier Porcar?
Crazy banyere nkà na ụzụ, egwuregwu na foto. Dị ka ọtụtụ, Apple gbanwere ndụ anyị. Ana m ewere mac m ebe ọ bụla. M hụrụ n'anya na-ruo ụbọchị na ihe niile, na m nwere olileanya na ọ ga-enyere gị obi ụtọ a sistemụ dị ka m na-eme.
A microcomputer technician kemgbe m malitere, m omiiko banyere technology n'ozuzu ya na Apple na ya ngwaahịa akpan akpan, nke m na-akpaliwo mmasị Mac. M na-enwe obi ụtọ ma ọrụ ma ọtụtụ oge ezumike na m na laptọọpụ.
Abụ m naanị omiiko banyere Apple ngwaahịa, dị ka ọtụtụ nde ndị ọzọ. Mac bụ akụkụ nke ndụ m kwa ụbọchị ma m na-agbalị iweta ya na nke gị.
Onye Mmepụta na sistemụ iOS na IT, na-elekwasị anya ugbu a n'ịmụ na idekọ akwụkwọ onwe m kwa ụbọchị gbasara sistemụ arụmọrụ Apple. M na-eme nchọpụta ihe niile metụtara Mac ma ana m ekekọrịta ya na akụkọ ga-eme ka ị mara ihe.
Ọ bụ Javier Labrador
Igwe Injin Electronic nwere mmasị na ụwa Apple yana maka Mac, nke ndị na-etinye aka na ihe ọhụrụ na teknụzụ dị ka ụzọ iji meziwanye gburugburu anyị. Riri ahụtụbeghị ịhapụ na ịmụ oge ọ bụla. Ya mere enwere m olile anya na ihe niile m dere ga-abara gị uru.
Ọ na-anụ ọkụ n'obi ịmụ ihe mgbe niile, enwere m mmasị n'ihe niile metụtara teknụzụ ọhụụ yana njikọ ha na ngalaba agụmakwụkwọ na agụmakwụkwọ. Abụ m omiiko banyere Mac, nke m na-amụ mgbe niile, na mgbe niile na-ekwurịta okwu ka ndị ọzọ nwee ike ịnụ ụtọ nnukwu sistemụ a.
Enwere m mmasị na teknụzụ n'ozuzu ya, ọkachasị maka ụwa Mac. N'oge m na -efu, m na -arara onwe m nye nchịkwa nke ụfọdụ ọrụ yana ọrụ weebụ dị ka Ọkachamara iPad, Ọnụ ọgụgụ Coronavirus o Adreesị IP, mgbe niile na Mac m, nke m na -amụta ihe kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa na omume ọma nke sistemụ arụmọrụ a, enwere m olileanya na isiokwu gị masịrị m.
Edemede na teknụzụ bụ ihe abụọ na-agụ m agụụ. Ma ebe ọ bụ na 2005 enwere m ihu ọma iji jikọta ha na-arụkọ ọrụ na mgbasa ozi pụrụ iche na mpaghara ahụ, na-eji MacBook n'ezie. Nke kachasị mma? Anọgidere m na-enwe obi ụtọ dị ka ụbọchị mbụ na-ekwu maka mmemme ọ bụla ha wepụtara maka sistemụ arụmọrụ a.
Ndewo ebe ahụ! M ka na-echeta mgbe m nwetara Mac mbụ m, ochie MacBook Pro na agbanyeghị na m tọrọ PC m n’oge ahụ nyere ya otu puku ntụgharị. Kemgbe ụbọchị ahụ enweghị ịlaghachi azụ ... Ọ bụ eziokwu na m na-aga n'ihu na PC maka ebumnuche ọrụ mana ọ masịrị m iji Mac m "kwụpụ" wee rụọ ọrụ na ọrụ nke m.